Bhabhironi rinosaina zvibvumirano zvitsva zvekuunza hupenyu hwakachengetedzwa pasi rose kune mamwe ma350k, kusanganisira mazana maviri nemakumi mashanu emakirogiramu anokosha akachengetedzwa
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » Bhabhironi rinosaina zvibvumirano zvitsva zvekuunza hupenyu hwakachengetedzwa pasi rose kune mamwe ma350k, kusanganisira mazana maviri nemakumi mashanu emakirogiramu anokosha akachengetedzwa
Bhabhironi nhasi yatsanangura kuwedzera kwayo, ichizivisa imwe c.135k hupenyu huchave nekuwana kukosha kwayo-kwakatarwa kwekuchengeta kwese kwese US neUK kuburikidza nekuwedzera kwayo kune dzimwe nyika dzeUS, Georgia neMississippi, uye nekuwedzera kukura muCalifornia. Izvi zvinoreva kuti kuburikidza nemubatanidzwa waro wakakosha-based care modhi, Bhabhironi 360 nebasa rayo mukutarisira kwekutanga, Bhabhironi rinenge richitarisira c. 350k anorarama pasi rose, kusanganisira 105k NHS GP paHupenyu hupenyu, kutanga kwa2022. Bhabhironi rakadzokorora 2021 uye 2022 kutungamira kwemari munaGunyana 15, 2021.
"Kuwedzeredzwa kwebasa redu kuchabatsira Bhabhironi kufambisira mberi chinangwa chedu chekusvika nharaunda uko kusvikirwa nekukwanisika kuri zvipingamupinyi, kuitira kuti hutano huve hunhu," akadaro Bhabhironi Muvambi & CEO Ali Parsa. "Kukura kwedu mukutarisira kwakakosha kunoenderera mberi kunoratidzira mukana wemuenzaniso wedhijitari-yekutanga, iri kuwedzera pamberi pehurongwa, zvese izvi tichichengetedza hutano hwepamusoro."
Bhabhironi rinowedzera huwandu hwevaAmerican vakashanda kuburikidza nehurongwa hwayo hwekukoshesa-huchengetedzwa pamwe nekuwedzeredzwa kwema 63k anogara kuGeorgia neMississippi, sepazuva rechibvumirano. Izvi zvichawedzerwa ne 17k vanogara muCalifornia pakutanga kwa2022. Izvi zvinoreva kuti ava varwere veMedicaid neMedicare vachange vachipiwa nguva yekuwana vanachiremba nevanamukoti vanosvika 24/7, kugona kuwana ruzivo rwevanhu uye rutsigiro, uye kupera kwese kusvika kumagumo ekuchengetedza, nechinangwa chekutungamira kune zvirinani mhedzisiro uye nemitengo yakaderera nekufamba kwenguva.
Kuwedzera kwekuchangobva kuitika kweUS kunopedzisa kukura kwepasirese kweBhabhironi, nehupenyu hunopfuura makumi mashanu nemashanu hwakawedzerwa munguva pfupi yapfuura muUK kuburikidza nekubatana kwayo neRoyal Wolverhampton NHS Trust pamusoro pevanhu 55k vanorarama kuburikidza neNHS GP Practice yavo, Bhabhironi GP iripedyo. Kuwedzera kwepasirese kweBabironi 105 kunoenderera mberi kunosimbisa musangano semutungamiri mukutanga-digital, kukosha-kwakatarwa, kunoenderana nekambani yekuvamba chinangwa chekupa hutano hwehutano husingakwanise uye husingakwanise kumunhu wese pasi pano. Bhabhironi rinogadzirisazve nzira iyo hutano hunounzwa nemhando inotyisa kwazvo ine chinangwa chekuchengetedza hutano hwevanhu, ichibva pane yazvino fizi-ye-sevhisi modhi inotarisa kurwara nedambudziko.
Chinhanho chehupenyu hwe350K chakafukidzwa pasirese chinouya panzvimbo yeiyo Bhabhironi, nemushumo wayo weH1 2021 wemari inoburitsa 472% pagore-gore-gore kukura kwemari, uye mubatanidzwa weUS $ 4.2B SPAC neAlkuri Global Acquisition Corp. yakarongerwa kuvhara munguva pfupi. . Sekambani inotengeswa neruzhinji, Bhabhironi rinotarisira kuve panzvimbo yekuvakira padanho raakatowana uye kuenderera mberi nekukwirisa mashandiro.